Amathuba Wokunakekela amaNdiya e-UAE naseVisa Kunikezwe
Dubai City Inkampani
Ifomu lihanjiswe ngempumelelo. Ngiyabonga!
Thuthukisa iphrofayela yakho ukuze ube ne-100%
$ 4.99 Thuthukisa
I- $ 9.99 Qeda Imininingwane Yokuthuthukisa
* $ 4.99 Yonke into inketho yamahhala + Umphathi we-HR noMqondisi wethu uzobheka i-CV yakho futhi senza i-CV yakho ibonakale eDubai, amalungu e-UAE njengesikhumulo seprimiyamu.
* $ 9.99 Sithumela i-CV ngokuphelele kwi-portal yethu ukuze, abaphathi be-HR nabaqondisi bazobheka i-CV yakho futhi sizokwenza isiqiniseko sokuthi i-CV yakho iba nge-premium ku-UAE, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait nakwamanye amazwe amaningi.
Isihloko sithunyelwe ngempumelelo. Ngiyabonga!
Thumela i-Article & Cheers eDubai
Uyamthanda uDubai? - Manje uthola ithuba lokubhala i-athikili noma inothi elifushane ne-athikili ende ku-United Arab Emirates.
Bhala i-athikili yakho amagama angenamkhawulo! Thumela ama-vibes amahle!*
Amagama angukhiye e-athikili yakho:
Ihlukaniswe yiComma - Dubai, Inkampani yami, Indlela Yokuphila,
* Yebo, ungangeza isixhumanisi kuwebhusayithi yakho!
* I-athikili yakho izothunyelwa kuwebhusayithi yethu ukuze, Abaphathi bebhizinisi nabanye abantu bazokwazi ukuyibona.
* I-athikili kumele ibe namagama amancane we-500 kepha isixhumanisi siyi-Dofollow!
I-HTML img Tag
Inkonzo ye-SEO ye-Premium ye-Middle East!
Beka amafayela lapha noma chofoza ukuze ukhethe
* Mahhala! Sithumela i-athikili / inothi elifushane bukhoma kusigaba sethu se- "NEW JOINERS".
* $ 9.99 Yonke into inketho yamahhala + Umphathi wethu Wezokumaketha uzobheka okuqukethwe kwakho futhi sizoqinisekisa ukuthi i-athikili yakho nesixhumanisi kuyabonakala eDubai, amalungu e-UAE futhi i-athikili yakho ingaba namagama afinyelela ku-2,000.
* $ $ 29.99 Sithumela i-athikili yakho futhi idizayini ngokuphelele ngezinhloso ze-SEO. Ngakho-ke, amarobhothi e-Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo azoba nokubheka okuqukethwe kwakho ngendlela efanelekile futhi sizokwenza isiqiniseko sokuthi iwebhusayithi yakho yaneliswa kakhulu e-UAE, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait nakwamanye amazwe ase-Middle East. (* Amagama angenamkhawulo)
Thumela i-Article mahhala!
I- $ 9.99 ibonakala e-Dubai, kuze kufike kumazwi we-2,000!
$ 29.99 Article design Ngokuphelele ngezinhloso ze-SEO eMiddle East.
Thumela i-Article & Isixhumanisi!
putBaytBannerAds (1929440, 'yabaphambili', 'en')
Amathuba emisebenzi yamaNdiya e-UAE ⭐⭐⭐⭐⭐
I-DUBAI BLOG - Konke mayelana nokusebenza nokuphila e-UAE
Faka isicelo semisebenzi eDubai - Amasu Nokucwaninga Komsebenzi e-UAE
Thola Imisebenzi Yasebhange eDubai
Imisebenzi Amathuba AmaNdiya e-UAE
Kuphephile ukuhambisa ku-UAE
Amathuba Emisebenzi AmaNdiya E-UAE, empeleni, yimali enkulu yokuxoshwa kwamaNdiya. Umnotho we-UAE ukhula ngokushesha yingakho nje unend amathuba okuqashwa. Uma useNdiya futhi ufuna umsebenzi, umhlaba wama-Arabhu ukhetho olukhulu. Kulula ukuthola umsebenzi eNdiya kunokuba ucabanga. Iningi labantu linamahloni okwenza isicelo phesheya ngenxa yokuhlelwa kwezinto nokwesaba ukungaziwa.
Muva nje, amaNdiya uhulumeni uqhamuka namaqhinga amasha hhayi nje ukucubungula kepha usize ukugcina ukuphepha kwezakhamizi zayo ngenkathi zisebenza emazweni aphesheya. Enye yezindawo eziphambili zabasebenzi e-UAE. Idume umhlaba wonke njengomhlaba wamathuba ochwepheshe kuyo yonke imikhakha.
Kusukela ekuqaleni konyaka, amaNdiya kudingeka ukuthi abhalise endaweni yesikhulumi eseku-inthanethi eqhutshwa nguhulumeni ngaphambili basuka baye e-UAE beyofuna umsebenzi. Lokhu kusebenza kubanikazi bamaphasiphothi abanga-ECR abahamba ngesisekelo somsebenzi. Ambalwa kakhulu amaNdiya aya e-UAE ngokuvakasha noma eholidini, i-visa elula kakhulu yokuqashwa. Uhulumeni ufuna noma isiphi isakhamuzi saseNdiya esithanda ukuya e-UAE ukuqeda inqubo yokubhalisa okungenani amahora we-24 ngaphambi kwesikhathi sokusuka uqobo. Inhloso kuphela ukuvikela inhlala-kahle nezintshisakalo ze Izakhamizi zaseNdiya ngenkathi zisebenza phesheya.
Ukuthola umsebenzi ku-UAE
I-UAE iyimakethe yomqashi elingana nethuba. Akudingeki ukhathazeke ngobuzwe bakho. Empeleni, isifunda sama-Arabhu Unobudlelwano obuseduze nezwekazi laseNdiya yingakho ukucutshungulwa kwemibhalo kulula uma ufanele ukuthola umsebenzi. Njengezakhamizi emhlabeni wonke, kufanele ucwaninge kabanzi ngamathuba atholakalayo futhi wenze izinhlelo zokusebenza ezifanele izintshisekelo zakho.
Kulula eNdiya kunezinye izingxenye eziningi zomhlaba ngenxa ye isinyathelo sikahulumeni ukusiza izakhamuzi ezinamakhono nezingenakhono zokuthola umsebenzi ngaphakathi nangaphandle kwezwekazi. Inani labantu baseNdiya liphakathi kokukhulu emhlabeni. Nabadala ukwenza ingxenye enkulu yabasebenzi, bambalwa kakhulu balaba abanemisebenzi ezinzile ngakho-ke imali engenakuthembeka.
Ngiyaqiniseka ukuthi uyasiqonda isimo somnotho eNdiya maqondana namazinga wemali engenayo yasekhaya. Akuyona imfihlo noma amahloni kuhulumeni; uhulumeni waseNdiya uphume ngesibindi ukusiza izakhamuzi zakhona ukuthi zithole umsebenzi phesheya kwezindawo ezihamba phambili njenge-UAE. Vele, lokhu kukhulisa i-GDP yezwe labo lokuzalwa. Kuyicebo likahulumeni kazwelonke elenza kube lula ukuthi amaNdiya athole umsebenzi e-UAE.
Kulula ukucubungula i-visa yabafundi esuka eNdiya iye e-UAE. Izindleko ezihlobene nokuhamba kwabafundi nazo ziphansi. It ikuqinisekisa indawo e-UAE. Inhloso, kulokhu, ukuhlela izwe ezweni. Ungafundela iminyaka ye-4 noma izinyanga ezimbalwa njengoba uthola umsebenzi. Ngezinga eliphakeme lokuqashwa e-UAE, awukwazi ukuphuthelwa umsebenzi; kungakhathalekile noma kuyingcweti kuye ngeziqu zakho.
Umfundaze oyiphupho ukukusiza ukuthi ufike ezweni. Iningi labaqashi e-UAE lizokusiza ukucubungula imvume yokusebenza yesikhashana. Uma ukwazile ukuthola umsebenzi isikhathi eside, imvume izokwandiswa bese igcina ingonaphakade. Ukuthola ukuba yisakhamuzi e-UAE yimpumelelo enkulu, kepha kufanele ubekezele futhi uhambisane nemisebenzi yakho. Kufanele uthole ukwethenjwa nabomdabu; ukuthembana kubalulekile kusiko lama-Arabhu.
Isiko lamaNdiya nelama-Arabhu lifana ngakho-ke ukusebenzisana okulula phakathi kwabomdabu kwakha amasiko womabili. Kufanele uthathe ithuba lobudlelwano obususelwe enkolweni ukuthola noma uluphi uhlobo lomsebenzi. Kumele yiba nomqondo ovulekile lapho ufuna umsebenzi e-UAE. Iningi labaqashi lifuna ukubheka, ukuhlola, futhi lisungule ukwethembana nokuzethemba nesisebenzi ngaphambi kokunikeza izindima ezithile futhi lihlanganyele namasu enkampani ethile. Lokhu kusebenza kuzo zonke izici zebhizinisi.
Vula izinhloso zakho, futhi ungathola kalula ukuthunyelwa okuvela kumngane noma isihlobo sozakwethu eNdiya. Ukuthuthela e-UAE kwi-visa yokuqashwa akunzima, kepha okokuqala, kufanele usebenze ekutholeni umsebenzi ofanele. Izinga lokuphila ezweni lama-Arabhu lincike edolobheni oyokhetha ukuhlala kulo.
Noma kunjalo, kufanele ugxile ekutholeni umsebenzi, futhi konke okulandelayo kuzolandela.
I-UAE ngumqashi ophambili; noma ngubani angavuma thatha ithuba lokuya eDubai ngisho nangempelasonto kuphela. Isifunda sama-Arabhu sikhula ngokushesha okusho ukuthi amathuba amaningi ebhizinisi nawokuqashwa. Uma unamakhono, ungathola amathuba amahle omsebenzi eDubai. Izinga lamaholo eDubai nalo liyamangaza; ngaphandle kwalokho, izindleko zokukhokhela izindlu kanye nokusetshenziswa kwazo azikho phezulu njengamanye amazwe aphambili emhlabeni wonke. Inhlanganisela yenala yamafutha kanye Isiko lama-Arabhu lenza kube indawo enhle kakhulu yokuba khona kwamaNdiya ngenxa yokuqonda phakathi kwalezi zinhlobo zombili.
Ngingawuthola umsebenzi? - Amathuba Emisebenzi yamaNdiya e-UAE?
IDubai inabasebenzi abanamakhono aphansi futhi ihlala ifuna abantu abanekhono lokugcwalisa lesi sikhundla. Abomdabu bacebile ngenxa yamafutha futhi abanankinga nokukhokhela abasebenzi inqobo nje uma ibhizinisi lisebenza njengoba belindele. Okuwukuphela kwendaba yokuthola umsebenzi ku IDubai ukuhlanganiswa kwesiko. Abomdabu base-Arab baqinile ezinkolelweni zabo futhi bangakhubeka kalula uma ungenzi ngenye indlela; ngenkathi ungeke wabelane noma uvume izinkolelo zabo, balindele ukuthi wenze ngokulandela izinkolelo. Kungakuhle ukubheka ukuthi usezweni labo okungenani, bangabaqashi.
Yize kuyinselelo kubantu abaningi abafuna imisebenzi eDubai, AmaNdiya abekwe kangcono ngenxa yokuhlanganiswa kwesiko. Isimo ngasinye salezi zinkolo senza kube lula ukuhlala ndawonye. Ngeke ube nenkinga njengomNdiya wokuhambisana nama-Arabhu. I-India nayo iqinile kumanani ayo, abalulekile kuma-Arabhu. Banomqondo wokuyalwa njengamaNdiya.
Yisizathu esisobala sokuthi lezi zifunda zombili zisondelene. Ukuqonda kwezinto zomphakathi nezenkolo kuzenza zibe abangane abahlala njalo. Ukube ubuyiqembu labaxoxisana nabenezimfanelo ezifanayo ngesisekelo sekhono, uzoba nethuba lokudlula konke ngenxa yemvelaphi yakhon. Ngenkathi lokhu kungagxekwa emingceleni ehlukahlukene, abaqashi baseDubai bathande futhi banelungelo lokukuthola.
Ngakho yebo, ungathola kalula i-Dubai uma uvela e-India.
Ngithola kanjani umsebenzi?
Amathuba awapheli, izingqinamba zikuthandela, kepha unomsebenzi owodwa kuphela, ekutholela umsebenzi ofanele. Njengoba kushiwo, iDubai inamathuba amaningi okuqashwa kepha akuwona wonke umsebenzi olingana namakhono akho, isipiliyoni, noma okuthandayo. Futhi, udinga ukwazi iziteshi ezikhangisa imisebenzi enjalo eDubai.
Uma ucacile ngeziqu zakho futhi ufuna umsebenzi othile, ungahle ufune ukucwaninga amafemu aphezulu eDubai futhi uma eqasha. Ungaba nesibindi futhi uthumele i-imeyili ebandayo ukukhangisa amakhono akho. Lokhu kungahunyushwa njengokuphelelwa yithemba noma ukuzethemba. Noma ngabe yikuphi okusebenzisayo, cishe ungaphuthelwa ithuba lokuqashwa lapho wenza oxhumana nabo ngqo. Icacisa izintshisekelo zakho futhi inhloso yomsebenzi kuyindlela elula yokuthola umsebenzi eDubai ngenkathi i-Expo 2020 iyeza.
IDubai iphakathi kwamadolobha aphezulu ane-inthanethi ezinzile zokuxhumana. Izinga lobuchwepheshe eDubai nayo yonke i-UAE nayo ikhula ngokushesha. Izinkampani eziningi zisebenzisa amapulatifomu edijithali ukuqasha noma ukubandakanya abathengi. Ukugxila kwakho ukusesha umsebenzi ezisekelweni eziku-inthanethi kungakuholela kalula enkampanini esekwe eDubai. Umdlandla onamasu edijithali nawo wenza kube lula ukuhlaba umxhwele umqashi. Ukuxhumana nomuntu ongaba umqashi eDubai nge-imeyili noma ngeziteshi ezikuwebhusayithi yabo noma kwabezindaba ezokuxhumana kuthinta isinqumo sabo sokuqashwa. Ama-Arabhu lapha alangazelela ubuchwepheshe futhi ukukhombisa amandla akho kuzobangela izinqumo zabo.
Izinzuzo zokusebenza e Dubai
NjengomNdiya, leli kuzoba yithuba eliguqula impilo ngoba yezinga lomnotho eliphakeme eDubai. Izinga lempilo liphakeme kakhulu uma liqhathaniswa neNdiya, kepha izindleko zihlala ziphansi. Amanani entela anomusa; izikweletu ezisetshenziswayo zisezingeni elifanele; Ama-elekthronikhi nezindleko ezijabulisayo nazo zilawulwa. Izinga lamaholo eDubai nalo lihle uma liqhathaniswa nezingxenye eziningi zomhlaba.
Khumbula, unethuba elihle uma use India. Uhulumeni waseNdiya futhi uyakweseka okusheshayo Ukusebenza kwama-visa okuqashwa eDubai.
Imisebenzi e-Dubai yamaNdiya e-UAE - "Umhlahlandlela ofundisayo kakhulu". Manje abafuna umsebenzi baseNdiya manje bangakwazi ukulayisha ukuqala kabusha kwenkampani yethu. Indawo yethu yokusebenzela indawo ethi Dubai City Company manje ukuqasha e-UAE. Ngalokhu engqondweni, ithimba lethu lisiza abahlali baseNdiya ukuba bathole umsebenzi esifundeni seGulf. Njengomqashi omusha wezebhizinisi ovela eNdiya. Ungasebenzisa isevisi yethu ukuthola umsebenzi wephupho ku-UAE. Ikakhulukazi e Dubai, Abu Dhabi naseSharjah Cities. Ngokuvamile, ithimba lethu lokuqasha liphethe imisebenzi emithakazelisayo e-Dubai yamaNdiya. Futhi izinsizakalo zethu ze-HR zizinikezelwe ikakhulukazi abafuna umsebenzi wamaNdiya. Yiba yisizwe ngokuqinile kwethu manje kulula kakhulu. Izinsizakalo zethu zikhululekile kubachwepheshe abasha. Ungayishayisha kabusha futhi ngezansi futhi thola umsebenzi wokuphupha e-UAE. Ngokuvamile, amaNdiya athola amathuba amakhulu eDaily City.
Uma ngifaka isicelo nenkampani yakho bengizoba nayo isiqinisekiso sokuthi imisebenzi izonikezwa izokwenziwa?. Impendulo yethu ingu-Yebo, inqobo nje uma usithumela isicelo sakho. Omunye wabamele bethu uzobuyela kuwe ngolwazi nemininingwane. Amanye amacala sidinga ukukhuluma nawe ngeSkype noma i-WhatsApp. Kepha ngemuva kwesicelo, ungalindela umsebenzi eDubai njengomuntu waseNdiya.
Ungakwazi yini ukuhlinzeka imisebenzi e-Dubai evela e-India?
Yebo, inkampani yethu isiza abantu abafuna umsebenzi waseNdiya ukuthola umsebenzi e-Emirates. Omunye wabaphathi bethu bakwa-HR uhlala esiza ukusiza ukuthola umsebenzi eDubai wokuphasisa i-Indian 12th kanye nemisebenzi eDubai yabasebenzi be-Indian 10th pass. Ngakho-ke, kunethuba elikhulu neDubai City Company yokuthola umsebenzi e-UAE. Inhloso yethu ukusiza abasebenzi abavela eNdiya ukuba babe omunye wabasebenzi bokufika e-Abu Dhabi noma eDubai.
Ukuphela kohlangothi olubi iqembu lethu elihlala libhekene nalo kanzima enqubekweni yesicelo. Lokhu kumele kwenziwe ngasohlangothini lwakho, futhi kufanele ube yi-100% uqiniseka ukuthi isicelo sakho somsebenzi siyenziwa ngokunaka kakhulu imininingwane eDubai. Ithimba lethu lihlala lizama ukusunduza uhlelo lwakho kancane ukuze likubeke asap nangokuthi amaholo angcono kakhulu.
Kukhona njalo izinga lemisebenzi enikezwayo esingayinika:
Isigaba sokuqala ( Abafundi Abasanda Kuphumelela ) Okungaphansi kwe- $ 3,000 kuze kufike ku- $ 4,5000 ngenyanga.
Ukuphathwa Okuphakathi (3 kuze kufike ku-10 iminyaka yokuhlangenwe nakho) Akungaphansi kwe $ 5,000 ngenyanga, amanye amacala kufika ku-$ 8,000 - $ 11,000 ngenyanga ngaphandle kwebhonasi.
Abaphathi Abaphezulu kumele babe ngaphezulu kwe-8 iminyaka yesipiliyoni sebhizinisi ebhizinisini laseDubai, ubunjiniyela noma isipiliyoni esithile sokuphathwa kweqembu. Amahholo ngalesi sikhathi angaphezulu kwe- $ 10,000 aze afike ku- $ 25,000 ngenyanga.
Abaphathi abafundile, Abaqondisi, i-CFO, i-CEO bangalindela okungaphezulu kune- $ 25,000 ngenyanga. Kepha le misebenzi inikezwa sicela usazise ngasese.
Kodwa-ke, uma ubheka okungaphezu kwalokhu, nokuthi amaholo ayindlela yokukuncane. Sicela wenze isicelo sakho nenkampani yethu ngoba iDubai inazo zonke izinto. Ngemuva kwalokho umphathi wethu wakwa-HR uzobheka amafayela akho futhi akusize ukhuphule ibha enamaholo.
Ingabe ngidinga ukuba ne-visa ukuthola umsebenzi ku-UAE?
Cha, elinye lamaphuzu aphambili nenkampani yethu lishesha futhi kulula ukuhambisa izinsiza. Ngakho-ke, uma sikhuluma, inkampani yethu ungathola incwadi yokuqashwa ngenkathi uhleli eNdiya. Iningi lemisebenzi eDubai yamaNdiya iyalawuleka online. Ngakho-ke, impendulo yakho ngu-cha, inkampani yethu ingakusiza ekutholeni umsebenzi e-United Arab Emirates. Elinye lamaphutha amakhulu iqembu lethu labasebenzi le-HR eliwabona nsuku zonke ukuntuleka kwesipiliyoni. Isibonelo, abantu baseNdiya abafuna umsebenzi kuma-visa wokuvakasha e-UAE. Futhi kungaphansi kwamaphesenti amabili ithuba lokuthi lo msebenzi wokufuna uphumelele.
Ngakho, ungawuthola kanjani umsebenzi eDubai njengeNdiya esikhungweni sezingcingo ke? Yebo, ukuphela kwendlela yokuqashwa e-Emirates kumane nje kuhlanganiswe zonke izinto. Isicelo sokuqala semisebenzi, lapho-ke abaqashi kufanele bakhiphe i-visa bese kubhalwa phansi izindiza ukuza e-Emirates ngendlela esemthethweni.
Faka i-CV kuDubai City Company
Chofoza Ngezansi ku-100% Isiqiniseko!
Sicela futhi wabelane ukuze usize abanye bathole umsebenzi e-Dubai
Imisebenzi e Dubai - Umhlahlandlela we-Middle East wokuthutha i-Expats
Amathuba Emisebenzi AmaNdiya E-UAE, empeleni, kuyinto enkulu. Kodwa-ke, ukuthuthela e-United Arab Emirates kuyisikhulu kodwa ngesikhathi esifanayo ukukhetha okuhle kakhulu. I-Dubai City iseseyona indawo engcono kakhulu ye-India exats. Ngokomsebenzi wokufuna abaqashi kusuka eNdiya kuya e-Dubai yiyona ndlela engcono kakhulu. Kodwa ngesikhathi esifanayo uma wenza isinqumo sokuya e-Dubai noma e-Abu Dhabi. Njalo ukunikezwa komsebenzi kufanele kuhlolwe ngokucophelela ngaphambi kokuthi thumela i-CV yakho.
Ngemuva kokucubungula ngokucophelela izethulo zomsebenzi izingosi zikaHulumeni ze-UAE, sicela uhlole ku-website ye-scam umeluleki. Ngakolunye uhlangothi, kufanele futhi wenze umklamo wendawo yelithuba akuyona isaziso esikhohlisayo. Ngaphezu kwalokho, ungathola ukunikezelwa kwezandla zomsebenzi. Wonke ama-expat ase-India ingafakwa imisebenzi yase-Dubai. Kungakhathaliseki ukuthi yini oyizwile, uma yenza ukumaketha kwakho ngomsebenzi e Dubai. Ngokuqinisekile uyokwandisa amathuba okuthola incwadi yokuqashwa.
Enye iphuzu eliyinhloko okumelwe ukwazi ngalo ngamathuba emisebenzi amaNdiya e-UAE. Ingabe leyo minyaka elandelayo emazweni aseGulf ngokuqinisekile iletha umsebenzi omusha ebhodini? Ngokwesibonelo, Umsebenzi we-Expo 2020 futhi I-FIFA World Cup eKatar futhi kuyithuba elikhulayo ku-GCC. Ngakho cishe wonke ama-expat azoba nethuba ukuthola umsebenzi emazweni aseGulf.
Ngabe Imisebenzi eDaily for Indian inganikezwa?
Enye yamaphuzu amahle i-Dubai City Company ewanikeza abavotayo impendulo esheshayo. Ithimba lethu lokuqasha, likhuluma ngokujwayelekile, linikezwa imisebenzi kungakapheli isonto. Kepha isikhathi eside kunazo zonke esisiphethe sasiseduze nesikhathi sezinyanga ze-6. Konke kuya ngesipiliyoni sokhethiweyo. Ngaphezu kwalokho, inhlangano yethu ngaso sonke isikhathi idinga ukuqiniseka ukuthi zonke izici nezidingo zizonikezwa njengokucela kwamakhasimende.
Sisiza abantu ukuba bahambe thola umsebenzi e-Dubai. Eqinisweni, sisiza nge-visa futhi ukuthola ukunikezwa komsebenzi ngaphakathi e-Dubai amathiphu. Inkampani yethu inikeza izinsiza zokusesha imisebenzi e-Emirates. Ngakho, abazovela eNdiya ngokuqinisekile bangaya e-Dubai. Sifikile ukuyokhipha ucwaningo olunzulu lwezemisebenzi nge Dubai ejulile, ulwazi lwe-UAE lwemakethe yomsebenzi. Isisekelo kulokho kuzama ukubeka abaqashiwe.
Lolwazi luzokusekela ukuze kube khona ukunyakaza komsebenzi ngaphakathi kwe-UAE. I-firm yethu iba ethandwa kakhulu esekelwe kuphela kumasevisi esihlinzeka ngemisebenzi emangalisayo ye-Dubai imisebenzi yamaNdiya.
Ngalokhu engqondweni, yethu Uhlelo lwe-WhatsApp lokuqasha umakhalekhukhwini wasiza indawo yamazwe ngamazwe umqashi womsebenzi ikakhulukazi ovela eNdiya. Ukubeka ngenye indlela abaphathi abaqashiwe baseNdiya esifundeni saseDaily. Ubanika ukuqonda okujulile emisebenzini yokuhola intela. Ngalokhu emisebenzini yengqondo e Dubai kufanele unikezele ekusebenzeni eMpumalanga Ephakathi.
Amathuba emisebenzi yamaNdiya athengisa e-UAE
Kunezindawo eziningi lapho amaNdiya angathola khona umsebenzi. Inkampani Dubai City ukubhala ibhulogi ngolwazi olunemininingwane. Futhi indlela smart ukusebenzisa isiza somsebenzi ukuxhumana nezinye expats. Futhi, zimbalwa izindlela ezinhle zokudluliselwa kwamaNdiya njengamaqembu emisebenzi kanye nokunethuba lokumema abanye futhi ukungeza iphrofayili yakho kumephu ye-Dubai esebenzisana nayo.
Ngakolunye uhlangothi, kufanele ubuke nezinkampani zokuqasha e-United Arab Emirates. Enye yezindawo ezinhle kakhulu e-UAE yiyona I-Recruiter ebizwa ngokuthi i-Careerjet futhi Inkampani eyaziwa kakhulu eNdiya njengeMonster Gulf. Kufanele ngempela ukusebenzisa ne-CV yakho. Okungaphezu kwabalingani be-100,000 ababhalisa lapho nsuku zonke, kufanele futhi ulandele lolo khokho.
Ngesikhathi usufuna imisebenzi e-Dubai nase-Abu Dhabi. Kufanele nakanjani ubuke kithi iziqondiso zabahambeli bamazwe ngamazwe. Futhi njalo uqinisekise ukuthi amathuba akho emisebenzi yamaNdiya ahamba ngendlela efanele. Ngoba i-Emirates ayiyona imakethe elula yokungena uma ungenayo isiqondiso esifanele kanye nolwazi.
Imisebenzi yeNdiya e-UAE
Uzothola iseluleko esibalulekile kubantu baseNdiya izithuba zemisebenzi e-Dubai. Isibonelo, kufanele wazi ulwazi oluyimfihlakalo kwi-label yebhizinisi eMpumalanga Ephakathi. Ukwengeza, kufanele wazi ulwazi oluhle lokuhlala futhi indlela yokuthola umsebenzi e-Dubai ngokushesha ngokusebenzisa iselula.
Ngekhono lokufanisa lokufanayo kanye nokwaziswa okuwusizo esikoleni zezingane zakho. Kanye nezinhlamvu ze-banking zolwazi, nezinsiza eziyisisekelo zokuzilibazisa ezifana nokuzivocavoca nokuqina. Ungasho ukuthi ulwazi olunikeziwe kwezinye izingosi akuzona izindaba eziwusizo. Kufanele usebenzise okuwukuphela website engcono kakhulu imisebenzi Dubai.
Eqinisweni, inkampani yethu yindlela engcono kakhulu yokuyisebenzisa izinsizakalo zokuqasha nezinye izinkampani azihlinzeki ngezinsizakalo ezinjalo. Ngaphezu kwalokho, i-Dubai City Company yenza izinsuku ezingu-60 kunoma yiziphi izinsizakalo ezikhokhelwa umsebenzi okhokhelwayo. Ngamanye amazwi ukumelelwa kwenkampani yethu kusiza Abafuna umsebenzi we-India ngokuphathelene nokusebenzisa imisebenzi yethu e-Dubai yamaNdiya amasevisi.
Bhekisisa emisebenzini yomsebenzi yamaNdiya e-UAE
Ukuthuthela e-United Arab Emirates neDaily City Company. Okumangalisayo nakakhulu okwenziwe kahle Imikhombandlela yokufuduka eMpumalanga Ephakathi ungathola ku-Dubai blog yethu.
Lokhu kusho eminyakeni edlule, njengomfanekiso, i Imakethe yemisebenzi yase-United Arab Emirates iguqulwe kusukela ekuphumeni kwamaphesenti asezweni langaphandle ukuba ibe indawo ehambelayo neyomhlaba wonke ochwepheshe baseNtshonalanga. Ukubeka ngenye indlela, i UAE iqukethe ama-emirates ayisikhombisa, Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah kanye noMm al-Quwain. Izindawo ezimbili ezinkulu zebhizinisi zase-Abu Dhabi kanye I-Dubai inikeza ngokuphila okuhle kakhulu futhi amathuba amakhono omuhle kakhulu.
Ngale nhloso, i-United Arab Emirates ingumbuso wezwe nomhlaba wokuqala izwe elinomlando omude wokuzinza kwezepolitiki nakwezenhlalo kweNdiya. Ngethemba lokuthi linomsebenzi omkhulu, ofundile kakhulu, wezilimi eziningi, futhi onamasiko amaningi ochwepheshe abanamakhono abavela eNdiya, ngokuxhumana okuhle kakhulu esifundeni nakwezinye izikhungo zezezimali. Ubufakazi obuningi obunamandla AmaNdiya e-Dubai inerekhodi eliqinisekisiwe leminyaka engaphezulu kwe-30 yokuletha amaphrojekthi e-ambitious amabhizinisi afana nobuchwepheshe, ukuhweba, ezemidlalo, ukuhamba, kanye nokuvakasha kwezokuphepha.
Kungani uhambisa e-Dubai?
Ngakwesokunene, i Amathuba Emisebenzi AmaNdiya e-UAE unayo indlela engahlelekile kwezamabhizinisi, nezinye izintela ezinhle kakhulu nezinye izibonelelo zezezimali nomaphi emhlabeni. Futhi kufanele kukhunjulwe ukuthi iDubai City inamathuba aphezulu emisebenzi. Futhi okuhle kakhulu ukufundisa umsebenzi wamaNdiya.
Ukukhomba ukuthi izimo zokuphila eziphephile zamaNdiya zenza indawo evelele yokuthola abaphathi bebhizinisi nemindeni yabo. Iningi lamazwe angaphandle aseNdiya bayathuthukiswa ngokushesha. Ngakho-ke, kufanelekile ukuthuthela e-Dubai.
Elinye iphuzu eliyisihluthulelo: ngaphakathi kwe-UAE kungenzeka uthole ukwehluka kweqiniso phakathi kwabantu ohlangana nabo abavela eNdiya. Ngaphansi kwalezo zimo, ama-11% kuphela abahlali angabezizwe, cishe i-21% ingama-Arabhu ngokuhamba kabusha abafuna umsebenzi emhlabeni jikelele e-Dubai. Kusuka kwamanye amazwe, i-57% yi-Asiya aseNingizimu kanye nama-11% asele ase-Asia aseMpumalanga nakwaseNtshonalanga. Ukuhlanganiswa kwamasiko, izilimi nezinkolo zangempela, kukhona okuvela kumazwe ahlukahlukene okugcwalisa izikhala zamakhono kuwo wonke amazinga.
Ngenxa yalesi sizathu, sizama ukukubonisa indlela nimisebenzi ye-ew Dubai. Ohlangothini olungalungile lwezeluleko zethu zezindleko, ukusesha umsebenzi ku Dubai kuyinkqubo ende kakhulu. Kodwa into yokuqala yokukhumbula sizozama ukwenza lokho kube lula kuwe. Ngakho ubufakazi obuqine kakhulu obuzokusiza ukuthi ubambe umakhala ekhukhwini izikhundla e-Dubai. Kuyinto yezokuxhumana e-Dubai.
Isibonelo, amathuba emisebenzi amaNdiya e-UAE nokuseshwa kwemisebenzi eGulf. Ingabe kuyiphupho labo. Ukucacisa nje ithuluzi elingcono kakhulu elibekwe enhlokodolobha ye-Emirate Amaqembu we-WhatsApp eGulf nase-United Arab Emirates yonke
Kungani ungahambi ku-Abu Dhabi?
Kunamaphuzu ambalwa ukuthi kungani kufanele uhambele enhlokodolobha esikhundleni sika-Abu Dhabi. Isibonelo enhlokodolobha ye-Emirates ihlala ikhula, izinkontileka ezintsha zibekwa lapho nsuku zonke. Isibonelo, ngisho ne-Linkedin ne-Facebook basanda kuvula ihhovisi lapho. Ngokwesinye isandla, I-Abu Dhabi indawo enhle kakhulu kubaphathi bezentengiso zezimoto, onjiniyela kanye nabasebenzi bakwa-Oyili nabegesi. Ngakho-ke, ukukhuluma konke, konke kuncike kulwazi kanye nesimo sakho.
Idolobha lase-Abu Dhabi lihle kakhulu kubantu abazinza abahle. Lowo onemindeni namakhaya akhe. Ngoba kuningi lezimemezelo zokupaka nemisindo emincane. Kuhlale kunamathuba amasha e-Abu Dhabi, kepha kumele kukhunjulwe ukuthi leli dolobha linezinto zalo kanye nezinhlelo zohulumeni abancane ohlangothini lwebhizinisi. Inkampani yethu ihlala ixwayisa amadolobha amakhulu ngoba yiwona angakusasa cizindawo ezifana ne-CEO namathuba wemisebenzi ye-CFO.
Amathuba Emisebenzi AmaNdiya e-UAE
Izindleko Dubai: Ngomuntu onethonya ofuna i umsebenzi e-Dubai. Iphuzu elivame ukunganakwa nje ukuhamba yedwa. Yiqiniso, kungenzeka ukuba uhlale ezingeni eliphansi kakhulu njengokuphila komsebenzi we-6500AED. Ukungasho izindleko zokuhamba kakade zikhokhwe ukuze zifike e-Dubai. Ngakho ekukhanyeni kokuphila eshibhile ku Dubai, udinga ukufaka izindleko zokuqasha e-Dubai Area nje ukuhamba ngesikhathi sokuya emsebenzini wakho. Kanye nephethiloli yemoto yakho, umshuwalense wemoto, kanye nezindleko zokugcinwa ngemali yokuvuselela imoto.
Inketho enhle kakhulu ukuqala umsebenzi omkhulu wokuzikhandla sifuna amathuba emisebenzi ye-Automotive ku-UAE. Ngaloluhlobo lomsebenzi, uzothola ithuba lokuthola imoto yamahhala nokushayela endaweni yakho yokusebenzela. Ngakolunye uhlangothi, uzokhokha kuphela uphethiloli nomshuwalense.
Yiqiniso, kukhona umehluko omkhulu phakathi kwamaNdiya nezinye izizwe. Ngokwesibonelo, Abasebenzi bakaFilippino bathuthela e-Dubai. Futhi bahlala kule ndawo emangalisayo. Kodwa iningi labo alihlali njengeNdiya. Bahola imali ephansi kakhulu. Futhi iningi labo lingatholi umsebenzi omuhle kanye nezinsizakalo zokufuna umsebenzi e-UAE.
Sisiza ama-Expats ngamathuba emisebenzi yamaNdiya ku-UAE.
Kukhona izindleko zokuhlala Dubai?
Izikweletu zasendlini zihlangana namanzi, ugesi, ifoni ukuze zikwazi ukukhuluma nabangane, vele, i-inthanethi, ukudla okungaphezulu, kanye nokudla ngokungeziwe noma noma yokudlela ngezikhathi ezithile. Ngaphezu kwalokho, ungahlanganiswa nomndeni / abancike kuwe abangathanda ukuba nawe eDubai. Ngokuqhathanisa izindleko zakho okufanele uzengeze ezizungeze i-AED 2000 kumuntu ngamunye eDubai. Ngokungafani nakwamanye amazwe, abasebenzi abajwayelekile baba ngababizi kakhulu. Kodwa-ke, ngokubheka iholo elihle kakhulu eDubai, ungayiqasha incekukazi imisebenzi yesikhashana e Dubai kusuka kwezinye izindawo Izinkampani zase Dubai uma ungathanda ukugcina ikhaya lakho lihlanzekile.
Amathuba emisebenzi yamaNdiya e-UAE iba izinketho ezintsha ezimangazayo ze-expatriate. Ngakho-ke akukhathaleki ukuthi yisiphi isikhundla osafuna ukusithola manje. Inkampani yaseDubai City isebenza kanzima ukuhlinzeka ngemininingwane yakho enemininingwane. Ngaphezu kwalokho, silawula ibhulogi yethu yabazingeli be-Asia yomsebenzi lapho abantu abasha bengathola imininingwane ebalulekile ngenqubo yokuqashwa kweDubai ne-Abu Dhabi.
Career Amathuba AmaNdiya e-UAE
Thola isidingo semisebenzi e-Dubai for Indian!
Nakuba lokhu kungaba yiqiniso kithi inkampani e Dubai khombisa uhlelo oluqashisayo lokuqasha e-United Arab Emirates kumfazi. Ngesikhathi esifanayo, sizama ukuthola isisekelo senani lezikhundla e-Dubai City. Futhi sisebenza njalo ngemisebenzi yokufundisa e-Dubai futhi IT imisebenzi e-Dubai. Ngakho-ke njengoba sifuna ukuthola amathuba emisebenzi e-Dubai kudingeka sikhathalele amaphrofayli abaqashi oyidingayo.
Ngakolunye uhlangothi, iDubai City Company ihlala izama ukuze uzuze inani eliphakeme lokubekwa kwe amathuba emisebenzi e-Dubai. Ngakho sizama ukukubeka ngokuhlukile Ukuqashwa e-Dubai futhi njalo ugcina abaphathi baseNdiya bajabule ngemisebenzi emirates emisha.
Ukufinyelela amathuba okusebenza ngamagatsha wokuqasha
Enye iphuzu eliyinhloko Ama-International Recruitment Agencies for expats bahlale begcina izidingo ezihlangene nabafuna umsebenzi e-Dubai. Ngokolunye uhlangothi, Dubai City Inkampani esikhundleni sokufinyelela imisebenzi elula. Ukuxhuma njalo abazingeli bemisebenzi kuze kube manje kanye neqoqo elifanele labantu abanjenge-Headhunters, ama-Recruitment Agencies, kanye nomphathi wezokuqasha ka-HR.
Ngaphezu kwalokho, kanzima noma yimuphi umcimbi ngokusobala sifinyelela kubo ngemithombo eminingi ngisho kusuka ePakistan. Ngakho-ke, okokuqala, kufanele ufinyelele ama-best-recruitment agents e-Dubai, ukwenza lokho, yebo, i-Google yona ye-Career e-Dubai bese uzama thola abaqashi abaphezulu e-Dubai nase-Abu Dhabi.
Eqinisweni, amanxusa angaqashiwe okuqashwa azohlale e-Google Imisebenzi. Ukwengeza ungakwazi ukucinga ngamazwe ngamazwe izikhungo zokuqasha eMumbai, noma abakwa-headhunters bendawo e-Hyderabad abanjengezinhlaka ze-UAE ezifanayo zingakusiza imisebenzi e-intanethi e-Dubai. Ama-ejensi e-Dubai agxile ekutholeni abantu abanekhono e-India kanye nabathengi abathintekayo bese bebeka isibonelo sokuba i-accountant imisebenzi e-Dubai noma enye imisebenzi emirates.
Ngokushesha wena njengomseshi womsebenzi e-UAE. Ngokuqinisekile uzohamba ngokushelela ukulwa a umsebenzi e-Emirates ngamaphrofayela ahlukene. Isibonelo, imisebenzi yehhotela e Dubai iyindlela enhle. Ngesikhathi samanje, kufanele futhi ulwe nemisebenzi yokuphepha e-Dubai eyabelwe nenkampani yethu ku-LinkedIn. Futhi ngokuhamba kwesikhathi imisebenzi yomshayeli e Dubai ngoba kulula kakhulu ukuthola. Bese ukrinini labo abazobe ukhetho futhi uxoxisane nabo abaningi. Umsebenzi wase-Dubai ukuqasha abaphathi e-United Arab Emirates bahlala bafuna abantu abasha abavela eNdiya. Ngokusobala ukufingqa futhi kulula ukukuthola eDubai futhi njalo ilungele ukusebenza kanzima emiholweni ehlukile.
Ok, ukuqala, uvela e-India futhi iningi lama-expats ase-Asia ahlelwe. Ngenxa yalokho-ke okuhloswe ngokuningiliziwe okufushane okuhlakaniphile kakhulu, okunamakhono abanamakhono, futhi okufana nabanye abaqondisa izinto ezihamba phambili. Sifeza okuningi ukubekwa kusuka eNdiya e-Dubai. Ngempela iqiniso lethu lihlale liqinisekile ukuthi siletha umphumela owodwa wokuqashwa kwamakhasimende ethu ase-Asia. Ukungasho ukuthi kubaluleke kakhulu kithi ukuvala inombolo ekhethiwe yezindawo zaseDaily city ezingenakuphikwa i-60 kuze kube yisikhathi sesikhathi se-90. Eqinisweni, inkampani yethu e-UAE izama njalo indawo yase-India abafuna umsebenzi kanye nezidingo kuphela imisebenzi yamuva e-Dubai.
Kungani Imisebenzi e Dubai nge-Indian iba yithandwa kangaka?
Qala Umsebenzi futhi uthole impumelelo enkulu ku-UAE
I-Dubai is okuwukuthi abafuna umsebenzi bamazwe omhlaba njengendawo ephezulu echumayo yokuziphindisela emsebenzini wokufingqa imisebenzi e-UAE. Ngalesi sizathu njalo ngenyanga abaphathi abaningi kusuka e-India ifike imisebenzi yokuthengisa e-Dubai. Ngoba kubalulekile ukuqaphela ukuthi okwenziwe ngemali kungakusiza ukwenza imali e-United Arab Emirates.
Ngaphansi kwalezi zimo, i-Dubai iba enye yemizi ebiza kakhulu futhi ecebile emhlabeni. Imisebenzi ejwayelekile e Dubai for Indian lapho iningi lama-Asiya liphila impilo yokunethezeka. Njengoba sekuphawulwe lapho uvakashele i-UAE futhi lizwe eligcwele abantu abacebile.
Ngesikhathi esifanayo uma uzokwazi ukuthi ungaphila ungakwazi ukuhlinzekwa kalula e-Dubayi ukuze uthole izinguquko. Futhi ekugcineni, uzoxhuma kwinani elikhulu labantu abacebile abangakusiza ukusesha umsebenzi wase Dubai.
Ngokushesha lapho uzoba ngumuntu ozoqashwa khona ekugcineni uzoqala ukuphila okunethezeka. Uma nje idolobha lase Dubai libamba inani elikhulu labadwebi bezakhiwo. Ngesikhathi lapho ama-expats afaka amahhotela amahle a ithuba lomsebenzi. Ngezinye izikhathi indawo yokuhlala yokuhlala kanye izindawo zokuthenga ezitolo zokuthenga njenge-career etholakalayo e-UAE.
Khona-ke umsebenzi edolobheni futhi uzoba khona. Ngemuva, le ndawo emangalisayo ibuye ihlonishwe njengenye yezinto ezivelele zokuthengwa zomkakho emhlabeni. Uzokwazi ukuthi uma ufika lapho futhi uqala ukwenza imali. Ngakho, maphakathi nokufuna a umsebenzi e-Abu Dhabi futhi i-Dubai ake sibe naso empilweni futhi umsebenzi okhona eMpumalanga Ephakathi.
Imisebenzi e-UAE ye-Indian futhi ayikho abasebenzi abanolwazi?
Wonke umuntu ofuna umsebenzi wakhe kuqala ukhumbula ukuthi yi-Dubai. Eqinisweni, kukhona no-Abu Dhabi lapho ofuna khona umsebenzi kufanele ahlasele. Njalo Indian in UAE ufuna ngobuqotho ushintsho lomsebenzi. Ngakho ngesikhathi esifanayo Ungangeni ukuzingela umsebenzi e-United Arab Emirates ekuvakasheni i-visas. Eqinisweni, amaNdiya amanengi atjela ukuthi azothola umsebenzi ekuvakasheni i-visa. I-7th Emirates ifuna wonke umsebenzi wabasebenzi, kusukela kunoma yimuphi umuntu ohlangene nabasebenzi kuze kube yibaphathi.
Indlela elula yokuthola umsebenzi eDubai ukuqala ngezinga eliphansi. Ngoba imisebenzi yokuphatha enikezwayo ayikhangiswa kangako ku-UAE. Iningi laziwa kakhulu alaziwa ukuthi alinikezwanga ngemisebenzi. Ukunikezwa futhi kushesha Indlela akekho umuntu onesipiliyoni yokuthola imisebenzi esezingeni eliphansi.
Ngenhloso yokusesha umsebenzi DUBAI CITY: AmaNdiya afike e-UAE. Futhi ikakhulukazi befuna imisebenzi yehhotela eMpumalanga Ephakathi, hhayi nje e-Emirates. Ungalokothi uphinde uvakashele ama-visa ngaphezu kwakho konke. Ngalokhu engqondweni, wonke umhloli womsebenzi waseNdiya kumele aqinisekise ukunikezwa kwemisebenzi ekusebenziseni i-visa e-Dubai. Isisekelo ngalokho abantu baseNdiya beza ngethemba lokuthi imvume ye-visa izohlinzekwa yi-ejensi yokuqasha. Okokuqala, yenza kahle futhi ngaphambi kokuba ufike ezweni uzama ukuthola i-visa yokusebenza e-UAE. Ukubeka ngenye indlela, ngisho ne-Indian consulate e-Emirates ithe kunezibalo ezikhulayo zokuduna umshayeli omusha wamazwe omhlaba kanye nezinhlelo ezijwayelekile zokukhwabanisa kwe-visa.
Umsebenzi e Dubai naseVisa for Indian
Isibonelo, kululekwa nge-2018 Gov kulandela inamba ephezulu yokukhwabanisa kwe-visa. Futhi ngokuvamile, ukubiza nokuvakashelwa kwamaNdiya abe yisisulu ekuhlaziyweni kokugcina kokubi ukusesha imisebenzi. Kunoma yikuphi, abase-Asia abantu abafuna umsebenzi kufanele baxoxe ne-consulate. Ngoba kunezinye eziningi Abasebenzi baseNdiya abaye baxoshwa ngamazwe ngama-career noma abaqashi njalo. Ekugcineni abasebenzi base-Asia abatholi umsebenzi noma inkokhelo ayikhokhelwe.
Kuze kube manje, i-UAE inenkinga enkulu nge I-Visa ye-Indian. Abafunwa umsebenzi abavela eMumbai babethenjiswa ngezikhathi ezithile imisebenzi ethile yokuthengisa e-Abu Dhabi futhi kungazelelwe bangatholi lutho. Kodwa ngemuva kokufika kwalowo mculi wezepolitiki utshelwe ukuba asebenze njengezisebenzi zemiholo engaphansi kwendawo yokwakhiwa futhi wabe esenezela ukuthi uzokwenza imali eNdiya. Ungakwazi futhi ukujoyina amaqembu emisebenzi wethu Izisebenzi zasePakistan e Dubai ukuze nje ube nombono ocacile. Yeka ezinye izizwe ezilawula amathuba emisebenzi. Ngisho indlela yokuthola umsebenzi e-Saudi Arabia kanye nokunye okuningi kwezindaba kanye nezindleko zeluleko.
Kuze kube sesikhathini samanje engxenyeni yokuqala ye-2017, i-consulate ye-India ithole umbiko ovela ku-UAE. Echaza ukuthi ekuhlaziyweni kokugcina inani lezikhalazo ze-540 zomsebenzi ezivela kubantu baseNdiya lixazululwe e-UAE futhi zathola umsebenzi e-Abu Dhabi noma e-Dubai City. Ngakolunye uhlangothi, umbiko wathi I-Asia expat izisebenzi e-UAE bayajabula kakhulu lapho behola kahle umsebenzi embonini yasebhange e-Dubai noma eNdiya.
Imisebenzi ekhokha kakhulu e-Dubai City?
Enye iphuzu eliyinhloko esingathanda ukuliveza nawe ngemisebenzi ekhokhelwa kahle kakhulu e-Dubai City futhi Amathuba Emisebenzi AmaNdiya E-UAE. Lolu hlobo lomsebenzi lidume kakhulu !. Amathuba wemisebenzi ye-CFO ne-CEO asavulekele abokufika base-Asia. Ngakho-ke, uma unesipiliyoni esihle kanye nemfundo kahle nenqanaba eliphakeme.
Dubai City Inkampani ukubuyekezwa kwemali e-Dubai nase-Abi Dhabi kufinyelela ngaphezulu kwezingcweti zemisebenzi ye-300. Kulokhu, izimboni eziyinhloko e-UAE zingcono kakhulu ukuthola umsebenzi. Futhi ngokuvamile, kufanele uthole ukuthi yiziphi izinkokhelo zomsebenzi ozozikhokhela futhi uzame ukuba entsha i-dream candidate evela eNingizimu Afrika. Ngaphansi kwalezi zimo, kuningi lokucatshangelwa kwesici okufanele ucabange ngaso. Uma ukhetha ukuqala umsebenzi omusha wephupho ku-UAE.
Ukunakwa okukhulu okufanele gxila lapho kukhona iholo eliphansi ibhalansi yempilo yomsebenzi ukuthi ngikwazi ukucinga ithuba elithe xaxa. Ngasohlangothini olubi umnyombo womsebenzi oguqukayo noma ongalawuleka kimi? Ingabe kunikeza ukulindela ukukhula okuhle kwekhono kanye nethuba lokuthola imali engenayo intela? Noma kuzongenza ngithole imali eningi esesandleni? Ngakho-ke bheka Amathuba Emisebenzi AmaNdiya e-UAE naseGulf futhi kuyini inketho engcono kakhulu yomsebenzi.
Amathuba aphezulu okuqasha e-Dubai for Indian
Eyona ndlela engcono kunazo zonke zeKomidi eliPhezulu eliPhezulu eDaily
Isilinganiso ngenyanga ukhokhe ekukhanyeni kwempesheni emangalisayo: Dh120,000
Kanye nohla lwemali: Dh65,000 kuya ku-Dh145,000
Empeleni, ochwepheshe bokuthengisa nabo bayakusebenza kahle
Ukungasho lutho ngenkokhelo yenyanga yenyanga kufaka phakathi impesheni: Dh85,000
Uhlu olulinganayo lomholo: Dh60,000 kuya ku-Dh100,000
Ukubalwa kwezimali eziphezulu kanye nezomsebenzi wezezimali e-UAE
Ngokubambisana neminye imisebenzi ehamba phambili futhi ngokufana neminye imholo eliphakathi nenyanga kufaka impesheni: Dh75,000
Uhlu olulinganayo lomholo: Dh55,000 kuya ku-Dh90,000
Ukwengeza nabaningi bamabhanki asezingeni eliphezulu kanye nomholo wenyanga wenyanga kufaka phakathi impesheni: Dh70,000
A nalokhu engqondweni banesilinganiso seholo: Dh53,750 kuya ku-Dh99,500
Kuhambisana ne-bonus emangalisayo ukukhokhela Abaqashi career e Dubai
Ngaphezu kwalokho, umsebenzi onzima kakhulu ukungena e-UAE njenge-Indian futhi inkokhelo yenyanga yenyanga ehlanganisa impesheni: Dh67,000
Uhlu olulinganayo lomholo: Dh60,000 kuya ku-Dh116,000
Kungumsebenzi onzima impela okufanele ngiwuqale, kepha ukunika amathuba amaningi
Akusho ukuthi odokotela basebenza e-United Arab Emirates
Isilinganiso semali yenyanga ngenyanga kufaka phakathi impesheni: Dh70,460
Kanye nezinye Imisebenzi yaseGulf ephezulu Ibanga lomholo weDokotela: Dh70,000 kuya ku-Dh220,000
Umholo ufanelekile Ochwepheshe bezinzwa zezinzwa, engakhulumi ngamakhanda ezinambuzane nezinkinga zokubeletha, ngokulinganayo nabantwana bezinhliziyo zabantwana / izazi zengqondo kanye nabahlinzayo abahlinzeka ngamathambo.
Ingabe usulungele ukusuka eNdiya ukuya e-Dubai?
Kunabafakizicelo abasha abangaphezu kwe-600,000 kudathabheki yethu. Nsuku zonke imisebenzi emisha eDubai kokukhulunywa ngamaNdiya kugeleza kwiwebhusayithi yethu. Inkampani yethu enabalandeli abaningi abasha abajabule nabafuna umsebenzi abasha hhayi abavela eNdiya. Ngoba sikholwa ukuthi wonke umuntu kufanele abe ithuba lokufakazela imakethe ematasa kakhulu emhlabeni.
Sakhe uhlobo oluhlukile lokuqashisa e Dubai. Kuze kube manje, siye sabasiza izivakashi ezingaphezu kuka-1,400,000 ezivela eNdiya. Njengoba kuye kwaphawulwa ngezinsizakalo esizivulekile uma kukufanele kakhulu, izinsuku ze-7 njalo ngesonto. Ohambeni olude, ungangena enkampanini yethu yokuqasha ngaphandle kokuqashwa.
Ngesikhathi esifanayo, ungahamba nge-a i-akhawunti yomsebenzi wokusesha. Ngokuvamile ukukhuluma ngomsebenzi wokufuna amaNdiya singcono kakhulu kulokhu esikwenzayo. Nakanjani, ekuhlaziyeni kokugcina, silindele umuntu ozokhuluma naye e-United Arab Emirates. Ngokuqinisekile ungathola imininingwane enhle ebalulekile kwamanye amalungu ethu. Ungaya esigabeni samaLungu bese uxhuma nezinkulungwane zabantu abadingisiwe.
Sebenza esikhundleni se-CEO njenge-expat yaseNdiya
Uyazi ukuthi kuningi kangaka I-CEO yama-expat yamaNdiya ukusebenza e-Emirates? Isibonelo, imisebenzi ye-Google e-Dubai manje isiyatholakala kubantu abafuna umsebenzi wamazwe ngamazwe. Ngakho, isibonelo, amathuba amasha emisebenzi yamaNdiya e-UAE avulekile. Ama-expats aseNdiya avunyelwe kakhulu e-Emirates. Futhi izinhlangano ezinkulu ziqasha nsuku zonke abantu abasha abavela eNdiya.
Esinye isibonelo sezikhundla eziphezulu zokuphathwa kwabokufika base-Asia yi-WhatsApp. Kulenkampani ethile, abaphathi abasha base-Asia basebenza ngezinga eliphakeme lokuhlangenwe nakho, ikakhulukazi eminyangweni ye-IT. Kubaluleke kakhulu ukuqaphela lokho inkampani yethu iqasha futhi ku-WhatsApp. Ngakho-ke uma unomuzwa omuhle wesipiliyoni ungathola umsebenzi neDubai City Company. Ngasohlangothini olubi, asinikezi umphathi noma isikhundla sabaphathi abaphezulu ngoba sesivele sithathe abaphathi abaphezulu ebhizinisini.
Amathuba Akhathalelayo WamaNdiya e-UAE - Zingezakho eDubai.
Manje sekuyisikhathi sokuphetha kubalulekile ukufuna umsebenzi e-Abu Dhabi noma e Dubai.
Kuyafaneleka ngempela ukuthola umsebenzi e-Dubai njengamaNdiya?
Ngokuqinisekile Dubai, lesi yisikhangiso esikhulu ku-TV. Kukhona manje a amaphrojekthi amaningi amasha eza esifundeni se-Gulf. Ngaphezu kwalokho iSaudi Arabia manje seyenze imikhawulo ethile kumaNdiya asebenzela Izinkampani zaseSaudi Arabia. Ngakolunye uhlangothi i-Qatar, ayikaze inikeze lutho olungaphezu kwezinkontileka zeminyaka ye-2-3. Ngakho-ke, njengesinqumo esihle inkampani yethu eyeluleka i-Emirates. Kunemisebenzi emisha engaphezu kwe-30,000 engezwe kumaphaneli emisebenzi ambalwa kuphela kubantu abasha enhlokodolobha ye-Emirates.
Olunye ulwazi okufanele lukukholise ukuthi uthole umsebenzi eDubai inani lamaNdiya e-UAE. Bangaphezu kwezigidi ezimbalwa abhalisiwe abasuka ezweni laseNdiya eDubai nase Abu Abuabi. Lokhu kufanele kukunikeze isiqinisekiso kancane ngesinqumo sakho. Ngoba uma izigidi zabantu zikwazile ukuthola impilo enhle e-UAE. Kufanele futhi uzibheke njengomuntu obalulekile emsebenzini omuhle.
With Dubai City Company ungaqiniseka ukuthi uma usebenza ngaphezu kwenethiwekhi yethu yomphakathi. Ngokuqinisekile uzobekwa amathuba namathuba omsebenzi amaNdiya ase-UAE azohlale ekhona futhi elawulwa yiqembu lethu le-HR.
Isiphetho kuwo wonke amaNdiya afuna umsebenzi e-Dubai
Sicabanga ukuthi kanye nazo zonke izingcezu zolwazi unolwazi oluningiliziwe mayelana ne umsebenzi wokumaketha e-Emirates. Ngakho-ke, empeleni, uvela e-India futhi ufuna umsebenzi e-Dubai kubalulekile ukuqaphela ukuthi ukufinyelela kumqashi akuyona into elula ukuyenza.
Ngakolunye uhlangothi, silapha ukuzokusiza, sibheka a Amaqembu e-WhatsApp abafuna imisebenzi. Ukuxhumeka okuxhunyiwe kuhlelo lokuphathi abaqashi, ukulayishwa okuyingqayizivele kakhulu kuphinda kukhetho ku-Dubai. Ngalokhu engqondweni ukuthola umsebenzi ovela eNdiya kuya e-United Arab Emirates kufanele kube lula kakhulu.
Ngokusekelwe kokuhlangenwe nakho kwe-Dubai City Company. Njengomfanekiso wemisebenzi futhi search career eMpumalanga Ephakathi, sine ukufaka amaholo e-Dubai iseluleko, ukulinganisa, nesinye iseluleko sokuthola umsebenzi e-UAE uma uvela e-India.
Ukuze sikubeke ngenye indlela, sizama ukubeka yonke i-expat evela e-India futhi sibenza babe abasebenzi abasebenza e-United Arab Emirates. Ngokuvamile, njalo cinga imisebenzi nge MBA bese ulondoloza usesho lwakho encwadini noma kuthebhulethi uma ngabe umqashi wakho wesikhathi esizayo uzama ukushayela wena ngokunikezwa komsebenzi.
Sinethemba lokubona umuntu omusha waseNdiya ehamba ebukhosini bempilo engcono kakhulu nephupho lama-Arabhu. Simane sinakho ngithemba ukuthi kuzoba nguwe!. Ngikufisela inhlanhla futhi unethemba lokuthi uzokwenza isicelo sakho neDubai Company.
Izikhombisi-ndlela ze-Multilanguage for Expats
I-Dubai City Inkampani manje inikeza iziqondiso ezinhle zeMisebenzi e-Dubai. Ithimba lethu linqume ukwengeza ulwazi ngolunye ulimi lwethu I-Dubay expats. Ngakho, ngalokhu engqondweni, manje ungathola iziqondiso, amathiphu kanye nomsebenzi e-United Arab Emirates ngolimi lwakho.
I-Sri Lankan Expats
I-Indonesian Exats e-Dubai
Abafuna umsebenzi wase-Uzbekistan
Abantu basePoland e-Dubai
Ukuze iPortugal Exats
I-Russian Exats e-Dubai
Izisebenzi zaseSpain e-Dubai
I-expents yesi-Hindi e-Dubai
Siyakwamukela, siyabonga ngokuvakashela iwebhusayithi yethu futhi ube ngumsebenzisi omusha wezinsizakalo zethu ezimangalisayo.
Ngabe uyayithanda iNkampani yaseDubai?
Ufuna Imisebenzi eDubai?
Uyemukelwa, eDubai City Company.
Sizimisele ukukwenza sikusize uxhumane nabanye expats futhi uthole umsebenzi e-United Arab Emirates.
Umbuzo wethu kuphela ukuthi, ungasisiza ukuthi Sikhule?
Sesha Inkampani e-Dubai
Mayelana ne-Dubai City Company
Singeminye ye-Expats Community ehamba phambili eMiddle East. Ingosi yethu yezenhlalo esiza nge Ukuqasha kanye nabasebenzi. Sisiza expats evela kuwo wonke umhlaba, ngokusebenzisa izinsizakalo zethu namanye amawebhusayithi emisebenzi eDubai.
Ukuthola iphupho umsebenzi e-UAE.
Unikezwe la maphuzu, uma unjalo Isisulu futhi ngifuna inkampani yokuqasha ngokusemthethweni e-Dubai. Zama insizakalo yethu bese Ubhalisa iphrofayela yakho.
Samukelwa njengenkampani ephezulu yamabhizinisi i100 e-United Arab Emirates. Singumthelela ophambili ngaphakathi kwezokuxhumana.
Siphathe izivakashi ezingaphezu kwe-30m e-UAE naseNdiya. Ngaphezu kwalokho, inhloso yethu kusiza kusuka kubaphathi abancane kuya kwabaphezulu ukuthola umsebenzi eMpumalanga Ephakathi.
Ngokuqinisekile, kufanele ucabangele inhlangano yethu eyeyakho ukufuna umsebenzi.
Indlela yokuthola umsebenzi e-Dubai?
Kunamakhasi ambalwa akusiza ukuthi uthole umsebenzi!
Layisha kabusha futhi imisebenzi amasayithi portal e-UAE
Xhuma naye Abaqashi abaphezulu eDubai
Thumela i-CV izinkampani ezizosebenza eDubai
Faka isicelo Ama-Recruitment Agencies e-Dubai
Siqasha futhi Imisebenzi e-Dubai 2018
Cabanga Umsebenzi weHulumeni e-Dubai
Umsebenzi eDubai Ithimba le-WhatsApp
Bheka ucwaningo lwe-Career e-UAE
Thumela i-CV Mahhala! 📁
Ifomu lihanjiswa ngempumelelo futhi lithunyelwa kuwebhusayithi yethu. Ngiyabonga!
Manje: Bhalisa i-CV 100% yakho yamahhala!
* Zethule kuMphathi Wokuqashwa Oyisikhulu
Imininingwane evela kulesi sigaba izothunyelwa bukhoma kwiWebhusayithi yethu!
Zazise Ngendlela efanele!*
Amakhono & Ukufaneleka - Ihlukaniswe yiComma (umphathi, abathengisi, unjiniyela)*
Lawa amagama akho abalulekile kuphrofayela, leyo ndlela abaqashi abazokuthola ngayo kusuka ku-Google
Isihloko Sakho Sobungcweti Sokuqalisa Sifinyezo:*
Lesi yisihloko sakho kuphrofayela, leyo ndlela abaqashi abazokuthola ngayo kusuka kwaGoogle
** Ungakhohlwa ukufaka imininingwane yakho yokuxhumana ngenkathi uthumela i-Letter yesingeniso Inombolo yocingo ne-imeyili.
* Kubalulekile okungenani amagama we-350! - Lapha yindawo lapho udinga ukugxila khona kakhulu ukuthola umsebenzi eDubai!
* Ungangeza futhi isixhumanisi kwi-LinkedIn Yakho, iphrofayela ye-Facebook noma kuwebhusayithi yangasese.
Incwadi Yesingeniso Isibonelo:
Abaphathi Abathandekayo beHr,
Igama lami nginguKatherine Sussman, futhi njengamanje ngizihlobo zokuqashwa kwe-XYZ Recruiting. Bengisebenza njengomqashi eminyakeni emithathu edlule.
Nginentshisekelo yokusuka emsebenzini wokuqashwa enkampanini enkulu iye ekuqatheni indawo yangaphakathi kokuthola inzuzo. Bengihlala ngisebenzela ukuthuthukisa i-ABC yeZingenzi-nzuzo futhi ngingathanda ukuletha amakhono ami akhona kwinzuzo efanayo. Ngiyazi ukuthi wenza lolu hlobo lomsebenzi weSunlight Nonprofit, futhi ngingakujabulela ukuzwa okuncane ngomuzwa wakho kulo mkhakha. Ngingathanda ukuhlela isikhathi sokuhlangana nawe ukuze kwenziwe inhlolokhono yolwazi.
Nginamathisele ukuqhubeka kwami ​​ukuze kubuyekezwe. Uma unesikhathi sengxoxo emfushane, ngicela ungazise. Ungangithinta nge-imeyili (ksussman@email.com) noma ngocingo (555-555-5555). Ngibheke phambili ekuzwenicngawe. Ngibonga kakhulu.
Ucingo olunekhodi yezwe
Faka isithombe sakho
Isikhundla siyasisebenzela? Sicela ukhetheUmphathi OmkhuluUmphathiUmbhaliUmmeleliAkekho Umsebenzi Onolwazi
Ngabe usifaka isicelo? Sicela ukhetheIsikhathi esigcweleOkwesikhashana
Imininingwane Yezemfundo Nesipiliyoni
Idiploma / Igama Lesiqu
Ikolishi / Igama LaseYunivesithi
Unyaka wokuthweswa iziqu
Umholo Ofunwayo e-USD
Inyanga / Unyaka
(isib. izinyanga ze-3, iminyaka ye-2 njll)
Umholo Wamanje ku-USD
Imininingwane yenkampani yamanje
Isinqamuleli Sokuhlangenwe Nakho:*
Izitifiketi Zencwadi Yesembozo +
Ukulayisha kwe-CV kwamahhala
Qalisa kabusha i-$ 4.99 Premium!
I- $ 9.99 I-CV yakho izobonakala ngokuphelele!
* Mahhala! Sithumela inothi lesingeniso bukhoma esigabeni sethu se- "NEW JOINERS".
Thumela ama-vibes amahle
Manje: Donsela inombolo yakho yocingo uye eDubai Community 100% Mahhala!
* Beka ifoni yakho eDubai
Inombolo yakho ye-WhatsApp izothunyelwa bukhoma kwiWebhusayithi yethu!
Kungani ungathanda ukuthumela inombolo ye-WhatsApp?*
Isihloko Sokukhangisa se-WhatsApp:*
Mahhala - Thumela inombolo ye-WhatsApp
I-Copyright © 2019 Dubai City Company. Wonke Amalungelo Agodliwe